labada dhinac ee Golaha shacabka oo gudiyo u saaraya xal u raadinta khilaafka. – Hornafrik Media Network
labada dhinac ee Golaha shacabka oo gudiyo u saaraya xal u raadinta khilaafka.
Hornafrik-Wararka laga helayo xarunta Villa Hargeysa ayaa sheegaya inuu socdo dadaalo la doonayo in xal loogu helo khilaafka culus ee ka dhashay mooshinka laga keenay Guddoomiye Jawaari, kaasoo Xildhibaanada kala qeybiyay.
Kulankii Baarlamaanka ee maanta qabsoomi lahaa ayaa la baajiyay, kaasoo abaabulkiisa ay wadeen dhinaca Mooshinka waday, waxaana la sheegay in tan iyo xalay ay socdeen dadaalo la xiriira xal u helida mushaakilka ka dhex taagan Baarlamaanka, si loo helo isu tanaasul.
Wararka ayaa sheegaya in Guddoomiye Jawaari uu soo magacaabay Guddi ka kooban 7 xubnood, kuwaasoo la kulmi doona guddi kale oo dhanka Guddoomiye kuxigeenka 1aad iyo Xildhibaanada mooshinka wada ka imaanaya, si loo ambaqaado xal u helida arrimaha muranka ka taagan yahay.
Qarax miino oo ka dhacay Duleedka magaalada Jowhar.